ကမ္ဘာ့စျေးအကြီးဆုံး စစ်လက်နက် (၁၀) ခု - hotnewmyanmar.com
ကမ္ဘာ့စျေးအကြီးဆုံး စစ်လက်နက် (၁၀) ခု
June 18, 2022 - by zorrow - LeaveaComment
ဒီနေ့ ဒီပို့စ်လေးကနေတစ်ဆင့် ကမ္ဘာပေါ်မှာ တန်ဖိုးအကြီးဆုံးသော စစ်လက်နက် ၁၀ ခုနဲ့ စစ်ရေးအစီအစဉ်တွေကို ပြောပြပေးသွားချင်ပါတယ်။
နံပါတ် ၁၀ မှာရှိနေတာကတော့ P-8A POSEIDON ဖြစ်ပြီး အဆိုပါလေယာဥ်ဟာ အမေရိကန်ရေတပ်အတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားတဲ့ စစ်လေယာဉ်ဖြစ်ပါတယ်။
P-8A POSEIDON ကို ရေငုပ်သင်္ဘော နှိမ်နင်းရေးစစ်ပွဲ၊ မြေမျက်နှာပြင် စစ်ဆင်ရေးနဲ့ ပို့ဆောင်ရေးတို့အတွက် အသုံးပြုကြပါတယ်။ ယင်းတွင် တော်ပီဒိုများ၊ မှိန်းပစ်ဒုံးများနဲ့ အခြားသော လက်နက်များ တပ်ဆင်ထားသည့်အပြင် ဆိုမာလီတွေကို ခြေရာခံနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ အာရုံခံစက်မျိုးကို ထည့်သွင်းထားပြီး ကန်ဒေါ်လာ ၃၃ ဘီလီယံကျော် တန်ကြေးရှိပါတယ်။
9. GERALD FORD AIRCRAFT CARRIER (CVN-78)
နံပါတ် ၉ မှာရှိနေတာကတော့ GERALD FORD လေယာဉ်တင်သင်္ဘော (CVN-78) ဖြစ်ပြီး US ရေတပ်မှာ အသုံးပြုကြပါတယ်။
အဆိုပါ လေယျာဥ်တွေမှာ လျှပ်စစ်သံလိုက်ဖြင့် လေယာဉ်လွှတ်တင်နိုင်တဲ့ စနစ်လိုမျိုးသော အဆင်မြင့် နည်းပညာများအပြင် လူအင်အားနည်းနည်းနဲ့ ရွက်လွှင့်နိုင်မယ့်စနစ်လိုမျိုး လူအင်အား ကုန်ကျစရိတ်ကို လျှော့ချရန် ရည်ရွယ်တဲ့ အခြားသော ဒီဇိုင်းအင်္ဂါရပ်များပါရှိကြပါတယ်။
CVN-78 ဟာ ကန်ဒေါ်လာ ၉.၈ ဘီလီယံ တန်ကြေးရှိသလို တန်ချိန် တစ်သိန်းကျော် အလေးချိန်ရှိပြီး လေယာဉ် ၇၅ စီး သယ်ဆောင်နိုင်မည်ဖြစ်ပါတယ်။
နံပါတ် ၈ မှာ ရှိနေတာကတော့ မိုင်းဒဏ်ခံနိုင်ပြီး ခြုံခုံတိုက်ခိုက်ခြင်းတွေကို ကာကွယ်နိုင်ဖို့အတွက် အထူးထုတ်လုပ်ထားတဲ့ စစ်ကားဖြစ်ပါတယ်။
MRAP ပရိုဂရမ်လို့ခေါ်တဲ့ ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်မှုများ မသက်ရောက်နိုင်တဲ့ အမေရိကန်ထုတ်ယာဥ်အမျိုးအစားတွေထဲက တန်ကြေးအကြီးဆုံးယာဥ်မျိုးဖြစ်ပြီး ဒေါ်လာ ၄၂ သန်း တန်ကြေးရှိပါတယ်။
ကျည်မပေါက်သလို၊ ဗုံး၊ မိုင်းတို့ရဲ့ သက်ရောက်မှုမျိုးလည်း မရှိတာကြောင့် US စစ်တပ်ကတော့ ဒီယျာဥ်တွေကို အာဖဂန်နစ္စတန်နဲ့ အီရတ် စစ်တပ်တွေမှာ အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။
မိုင်းဒဏ်ခံနိုင်ပြီး ခြုံခုံတိုက်ခိုက်ခြင်းတွေကို ကာကွယ်နိုင်ဖို့အတွက် အထူးထုတ်လုပ်ထားတဲ့ စစ်ကားဖြစ်ပါတယ်။ MRAP ပရိုဂရမ်လို့ခေါ်တဲ့ ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်မှုများ မသက်ရောက်နိုင်တဲ့ အမေရိကန်ထုတ် ယာဥ်အမျိုးအစားတွေထဲက တန်ကြေးအကြီးဆုံး ယာဥ်မျိုးဖြစ်ပြီး ဒေါ်လာ ၄၂ သန်း တန်ကြေးရှိပါတယ်။
ကျည်မပေါက်သလို၊ ဗုံး၊ မိုင်းတို့ရဲ့ သက်ရောက်မှုမျိုးလည်း မရှိတာကြောင့် US စစ်တပ်ကတော့ ဒီယာဥ်တွေကို အာဖဂန်နစ္စတန်နဲ့ အီရတ် စစ်တပ်တွေမှာ အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။
7. UGM-133A TRIDENT II
နံပါတ် ၇ မှာ ရှိနေတာကတော့ UGM-133A TRIDENT II ပဲ့ထိန်းဒုံးကျည် ဖြစ်ပါတယ်။ UGM-133A TRIDENT II ကိုတော့ ကယ်လီဖိုးနီးယား၊ Sunnyvale ရှိ Lockheed Martin ရဲ့ အခြေစိုက်စခန်းစနစ်မှ ထုတ်လုပ်ထားပြီး အမျိုးအစားကတော့ ရေငုပ်သင်္ဘောမှ ပစ်လွှတ်သော ပဲ့ထိန်းဒုံးကျည်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဒုံးကျည်တွေကိုတော့ အမေရိကန်နဲ့ ဗြိတိန် ရေတပ်တို့မှာ အဆင်သင့်ပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။ သို့ပေမဲ့ နျူကလီးယားထိပ်ဖူးများ တပ်ဆင်ထားသောကြောင့် လက်ရှိအချိန်ထိတော့ ယင်းလက်နက်ကို အသုံးပြုထားရခြင်း မရှိသေးပါဘူး။
ဟန်ပြ ခြောက်လှန့်ဖို့အတွက် အရံသင့်ရှိနေပေမဲ့ တစ်ခါမှ အသုံးမပြုရသေးတာကြောင့် အောင်မြင်နိုင်ချေ ရာခိုင်နှုန်း ရှိ၊ မရှိကိုတော့ အသုံးပြုတဲ့အခါမှ သိရမှာဖြစ်ပြီး ရေတပ်နှစ်ခုဟာ အဆိုပါ ဒုံးကျည်စနစ်အတွက် စုစုပေါင်းဒေါ်လာ ၅၃.၂ ဘီလီယံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားခဲ့တာပါ။
နံပါတ် ၆ မှာ ရှိနေတာကတော့ V-22 OSPRET စစ်ရဟတ်ယာဥ်ဖြစ်ပြီး သမားရိုးကျ ရဟတ်ယာဉ်၏ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကို တာဘိုပရော့တိုက်လေယာဉ်ရဲ့ တာဝေးပစ်စွမ်းရည်၊ မြန်နှုန်းမြင့်စွမ်းထည်တွေနဲ့ ပေါင်းစပ်ထုတ်လုပ်ထားခဲ့တဲ့ ဘက်စုံသုံး စစ်လေယာဥ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။
ရဟတ်ယာဥ်ကိုမှ အဆင်မြင့်တင်ထားတဲ့ အင်ဂျင်၊ တောင်ပံတွေနဲ့ တာဝေးပစ်စွမ်းရည်တို့ကြောင့် စစ်ပွဲတွေမှာ မဖြစ်မနေ အရေးပါတဲ့ တိုက်လေယာဥ်အဖြစ် အသုံးတော်ခံနေပြီး ဂျပန်နဲ့ အမေရိကန်စစ်တပ်မှာသာ ဒီလေယာဥ်တွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။
5. F/A-I8 E/F SUPER HORNET
နံပါတ် ၅ မှာ ရှိနေတာကတော့ F/A-I8 E/F SUPER HORNET တိုက်လေယာဥ်ဖြစ်ပြီး စစ်ပွဲများမှာ ရေရှည်အသုံးပြုနိုင်ရန် စီစဉ်ထားတာကြောင့် ယခင် တိုက်လေယာဥ် မျိုးဆက်များထက် ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ အရည်အသွေးကောင်းတွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။
ဒီတိုက်လေယာဥ်တွေ အများစုကိုတော့ အမေရိကန် ရေတပ်က အသုံးပြုနေကြပြီး ၎င်းတို့ကို လေယာဉ်တင်သင်္ဘောများပေါ်မှာ တပ်ဖြန့်ထားခြင်းမျိုး ပြုလုပ်ထားကြပါတယ်။
အဆိုပါ တိုက်လေယာဥ်တစ်စင်းစီမှာ အရေးပေါ်အသုံးပြုရန်အတွက် ၂၀ မီလီမီတာ သေနတ်တစ်လက်အပြင် ဝေဟင်ပစ်ဒုံးကျည်များ၊ မြေပြင်ပစ်ဒုံးကျည်များနှင့် လေဆာလမ်းညွှန်ဗုံးများ အပြည့်အစုံတပ်ဆင်ထားပါတယ်။
နံပါတ် ၄ မှာ ရှိနေတာကတော့ F-22 RAPTOR ဂျက်လေယာဥ် ဖြစ်ပြီး ဒီလေယာဥ်ကိုတော့ အဓိကအားဖြင့် လေကြောင်းဆိုင်ရာ တိုက်ခိုက်မှုတွေမှာ အသုံးပြုကြပါတယ်။
ထိပ်တန်းတိုက်လေယာဉ်ထဲက တစ်စင်းဖြစ်ပြီး ၎င်းတွင် မြေပြင်တိုက်ခိုက်မှု၊ အီလက်ထရွန်းနစ်စစ်ပွဲနှင့် အချက်ပြထောက်လှမ်းရေးစွမ်းရည်များ ပါရှိနေပါတယ်။
F-22 RAPTOR ဟာ ကန်ဒေါ်လာ ၇၉.၂ ဘီလီယံ ကုန်ကျပြီး ခေတ်ပေါ် ကိုယ်ပျောက် တိုက်လေယာဉ် တစ်စီးဖြစ်တာကြောင့် တာတိုပစ် ဝေဟင်ပစ် ဒုံးကျည် နှစ်စင်းနှင့် တာလတ်ပစ် ဒုံးကျည် ခြောက်စင်းတို့ ပါရှိနေပါတယ်။
သူ့ရဲ့ တည်နေရာကိုပင် မသိရှိမီ အချိန်အတွင်း ပြိုင်ဘက်ကို ဝေဟင်မှ ပေါက်ကွဲစေရန် လုပ်ဆောင်နိုင်သည့် အကွာအဝေး ပစ် ဝေဟင်ပစ်ဒုံးကျည်အမျိုးမျိုးကို ပိုင်ဆိုင်ထားသလို ကိုယ်ထည်မှာလည်း ဗုံးများသယ်ဆောင်ကာ အခြားမစ်ရှင်များကို လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသေးတယ်။
နံပါတ် ၃ မှာ ရှိနေတာကတော့ VIRGINIA CLASS SUBMARINE နံပါတ်သုံးမှာ ရေငုပ်သင်္ဘောဖြစ်ပြီး သင်္ဘောဟာ ကိုယ်ပျောက်ထောက်လှမ်းရေးနဲ့ လက်နက်စနစ်နည်းပညာများ ပါဝင်တဲ့ အမေရိကန်ရေတပ်ရဲ့ လတ်တလော အသုံးပြုမှုအများဆုံး ရေအောက်စစ်ရေယာဉ်များဖြစ်သည်။
ဒီရေငုပ်သင်္ဘောတွေဟာ ၂၀၄၃ ခုနှစ်အထိ စစ်ယျာဥ်စျေးကွက်ထဲမှာ ရှိနေမနိုင်သလို အနည်းဆုံး ၂၀၆၀ ခုနှစ်အထိ အသုံးပြုမှုတွေရှိနိုင်တယ်လို့ မျှော်လင့်ရပါတယ်။ ၂၀၇၀ ခုနှစ်လောက်အထိကို ဒီသင်္ဘောတွေဟာ နည်းပညာအကူအညီနဲ့ အဆင့်မြှင့်တင်နေနိုင်ဦးမယ်လို့ မျှော်လင့်ရပါတယ်။
ကန်ဒေါ်လာ ၈၃.၇ ဘီလီယံကုန်ကျထားတဲ့ Virginia-class ရေငုပ်သင်္ဘောတွေဟာ ကုန်းတွင်းပိုင်းရော ရေပြင်ပိုင်းမှာပါ လည်ပတ်နိုင်ရန်အတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားတဲ့ နျူကလီးယားစွမ်းအင်သုံး တိုက်ခိုက်ရေး ရေငုပ်သင်္ဘောဖြစ်ပါတယ်။ သင်္ဘောကိုယ်ထည်မှာလည်း မိုင်းများ၊ တော်ပီဒိုများနှင့် Tomahawk ဒုံးကျည်များ အပါအဝင် လက်နက်မျိုးစုံ တပ်ဆင်ထားပါတယ်။
2. ARLEIGH BURKE DDG 51
နံပါတ် ၂ မှာ ရှိနေတာကတော့ ARLEIGH BURKE DDG 51 ဖျက်သင်္ဘောဖြစ်ပြီး ဒုံးပျံတစ်စင်းတည်းကိုပဲ ဒေါ်လာ ၁.၈၄၃ ဘီလီယံ ကုန်ကျတာကြောင့် ဖျက်သင်္ဘောတစ်စင်းလုံးဆိုရင်တော့ ဒေါ်လာ ၁၀၁.၈ ဘီလီယံခန့်လောက် ကုန်ကျပါတယ်။
အခြားဖျက်သင်္ဘောများလိုမျိုး တာတိုတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ ပိုကြီးသောသင်္ဘောများရဲ့ တိုက်ခိုက်မှုတွေကို ကာကွယ်နိုင်ရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားတာကြောင့် သေးငယ်သော်လည်း လျင်မြန်ပြီး အရှိန်ထိန်းနိုင်တဲ့ စစ်သင်္ဘောမျိုးပါ။
ဝေဟင်ပစ်ဒုံးကျည်များမှ မြေပြင်ပစ်ဒုံးကျည်များအပြင် ဗျူဟာမြောက် တိုမာဟော့ဒုံးကျည်များအထိ လက်နက်များပါရှိသည့် ပဲ့ထိန်းဒုံးကျည် အများအပြားကို အသုံးပြုထားသလို တော်ပီဒိုများ၊ ငါးလက်မသေနတ်များနှင့် မိုင်းရှာဖွေစက်များပါ ပါရှိတာကြောင့် ပိုမိုကျယ်ပြန့်တဲ့ စစ်ဆင်ရေးများမှာပါ အသုံးချနိုင်ပါတယ်။
နံပါတ် ၁ မှာ ရှိနေတာကတော့ F-35 LIGHTNING II တိုက်လေယာဉ် ဖြစ်ပြီး လက်ရှိစစ်ဘက်ဆိုင်ရာတွေမှာလည်း အသုံးတည့်နေတဲ့ လေယာဥ်ဖြစ်တာကြောင့် ၎င်းရဲ့တန်ဖိုးဟာလည်း အသုံးပြုနေသမျှ သက်တမ်းရဲ့ ခန့်မှန်းခြေ ဆယ်နှစ်နဲ့ ငါးနှစ်ခွဲအတွင်းမှာ ခန့်မှန်းခြေ ဒေါ်လာ ၁.၅ ထရီလျံထိ မြင့်တက်လာမယ်လို့ ခန့်မှန်းထားကြပါတယ်။
အလွန်အမင်း တန်ကြေး တိုးမြင့်လာမှုကြောင့်လည်း ဒီတိုက်လေယာဥ်တွေဟာ နာမည်ဆိုးဖြင့် ကျော်ကြားလာခဲ့ပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ ဆယ်စုနှစ်ခွဲကျော်ခန့်ကတည်းက ဒီလေယာဥ်တွေရဲ့ ထုတ်လုပ်မှုကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ပေမဲ့ တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အသားပေးပြီး ကုန်ကျစရိတ်များ မြင့်တက်လာခြင်းဟာလည်း ထည့်တွက်ရမှာပါ။
တန်ဖိုးအရမ်းကြီးတာကြောင့် နောက်ဆယ်စုနှစ်အတွင်းမှာ ဆက်ရှိနေနိုင်ဦးမလာဆိုတာကိုလည်း စောင့်ကြည့်ရဦးမှာပါ။
လွန်စွာမှကောင်းမွန်လှတဲ့ အာရုံခံကိရိယာများနဲ့ အသံထက်မြန်သော အမြန်နှုန်းများဟာ F-35 ကို အကောင်းဆုံး တိုက်လေယာဉ်အဖြစ် ကျော်ကြားလာစေခဲ့ပေမဲ့ အခုချိန်မှာတော့ လေယာဉ်တစ်စင်းယာ အနည်းဆုံး ဒေါ်လာ သန်း ၁၀၀ ကုန်ကျမယ်လို့ သိရှိရပါတယ်။
Previous Article လေယာဉ်အင်ဂျင်နီယာတွေနဲ့ လေယာဉ်တွေကို ဒုက္ခပေးတတ်တဲ့ FOD အကြောင်း
Next Article ဧရိယာ ၅၁ က ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ ယာဉ်များ